NY FINOANA SY NY VONINAHITR’ANDRIAMANITRA – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 novembre 1, 2013 novembre 1, 2013 Laisser un commentaire sur NY FINOANA SY NY VONINAHITR’ANDRIAMANITRA
« Tsy voalazako va fa raha hino hianao, dia ho hitanao ny voninahitr’ Andriamanitra? » Jaona 11:40
Hoy tokoa mantsy i Maria tamin’ny maty i Lazarosy anadahiny : « Tompoko, maimbo izy izao », satria Jesosy niteny mba hanesorana ny vato. Nino i Maria fa afaka nanasitrana an’i Lazarosy i Jesosy, fa tsy nino kosa izy fa afaka nampitsangana an’i Lazarosy tamin’ny maty i Jesosy. Ny fanasitranana marary dia efa asa hita matetika nataon’i Jesosy, fa ny mampitsangana amin’ny maty kosa dia mbola tsy nahazatra.
Misy olana mitranga eo amin’ny fiainanao izay tena mahakivy anao ary mbola tsy nahazo anao mihitsy ve? Raha hino hianao dia ho hitanao ny voninahitr’Andriamanitra! Ary Jesosy, nony nahita azy nitomany sy ny jiosy niaraka taminy nitomany koa, dia vonto ny fanahiny, ka tora-kovitra Izy,… Jesosy nitomany. Hita taratra eo ny lafiny iray maha olombelona an’i Jesosy. Azon’ny fietsehampo Izy. Nangovitra Izy, nitomany Izy. Eo anatrehan’ny zava-misy dia azon’alahelo toa ny olona tsotra ihany i Jesosy. Mety ho hevitr’izao Jesosy nitomany izao dia ny fanehoana amintsika fa olona mahatsiaro izay tsaroantsika ihany koa ny Tompontsika, ary iharan’ny vesatra izay mpahazo ny olom- belona ihany koa. Rehefa avy nanontany ny nandevenana an’i Lazarosy Jesosy dia nesoriny ny vato, ary Jesosy nanandratra ny masony ka nisaotra ny Ray. Fantany fa mihaino Azy mandrakariva ny Ray. Na dia vao avy nitomany aza Jesosy dia mbola velona ny finoany ary mbola afaka nisaotra Izy. Fianarana ho antsika izany. Mbola tokony hahay misaotra an’Andriamanitra isika na dia amin’ny fotoan-tsarotra aza satria izany no mariky ny fatokiantsika Azy. Mila mitazona mafy ny fatokiana ny Ray isika amin’ny fotoana rehetra. Ary niantso tamin’ny feo mahery Jesosy: Ry Lazarosy, mivoaha! Eo imason’olona marobe, sady olona mety mankahala an’i Jesosy ireo nanatrika teo. Teo anatrehan’izany anefa dia tsy niahotra akory Izy raha niantso tamin’ny feo mahery. Mbola mampiseho ny fatokian’i Jesosy ny Ray izany. Voalaza eto fa nivoaka ny maty. Manana fahefana amin’ ny maty Jesosy. Feo mahery avy Aminy indray mandeha dia nitsanagana ny maty. Moa tsy fampisehoana ny herin’Andriamanitra amin’ny fahefany hampitsangana ny maty amin’ny andro farany ve izany? Ao amin’ny Deot 32:39 dia hoy Jehovah manambara ny tenany: »Izaho no mahafaty sy maha-velona, ary ambarany fa tsy misy andriamanitra eo aminy fa Izy dia Izy no Izy! Ary maro tamin’ireo Jiosy teo amin’i Maria ka nahita ny nataon’i Jesosy no nino Azy! Eo anatrehan’ny zava-tsarotra indrindra no tokony hatoky an’i Jesosy isika. Nasehon’i Jesosy teto fa tao anatin’izany indrindra Izy dia efa nisaotra na dia mbola vao hangataka aza: toy ny efa nahazo valiny sahady.Ny fahafatesana no isan’ny mampatahotra ny olona indrindra nefa nanehoan’i Jesosy ny Fahefany izany .
Fampianarana izay azo raisina eto koa dia izao: na dia nofo aman-drà aza isika dia azon’Andriamanitra ampisehoana ny voninahiny raha miray Aminy! Misy fotoana àry efa nampihozongozona ny finoantsika teo antrehan’ny zava-tsarotra ; fa izao kosa: mampiseho Jesosy fa Izy no Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy Izy. TOKONY hatoky Azy isika, tokony hitazona mafy ny fatokiana Azy isika, fa na ny maty aza dia hainy ny manangana azy!
Publié parfilazantsaramada novembre 1, 2013 novembre 1, 2013 Publié dansUncategorized